Thomas Tuchel oo tilmaamay dhibaatada Romelu Lukaku ee kooxda Chelsea – Gool FM
(London) 20 Okt 2021. Tababaraha kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa sheegay inuu dareemayo in laacibka reer Belgium ee Romelu Lukaku uu la ildaran yahay xoogaa daal jireed iyo maskaxeed, kaddib markii uu ciyaaray kulamo badan muddadii u dambaysay.
Tababaraha reer Germany ee Thomas Tuchel ayaa ku sheegay shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor kulankii Chelsea iyo Malmo ee Champions League in Lukaku uu maskax ahaan daalay taasina ay saameysay qaab ciyaareedkiisa.
Si kastaba ha ahaatee, Romelu Lukaku ayaa markaa ciyaaray 6 kulan isaga oo aan wax gool ah dhalin, sidoo kale wuxuu goor hore ka soo dhaqaaqay xulka qaranka Belgium kaddib guuldaradii ka soo gaartay dhigooda France Semi-finalka tartanka UEFA Nations League.
Tababaraha reer Germany ee Thomas Tuchel ayaa ku sheegay shirka jaraa’id uu ka soo muuqday:
“Romelo wuxuu ciyaaray kulamo badan, waa cayaaryahan fiican wuxuuna doonayaa inuu guuleysto.”
“Waan ogahay inta uu doonayo inuu ku soo laabto si uu sameeyo natiijo wanaagsan iyo waxqabad wanaagsan.”
“Waxaan dareemayaa inuu daalay waqtigan, aniga ahaanna wuxuu cadaadis badan naftiisa ku saaray xulka qaranka Belgium.”
“Laakiin way adag tahay in la qiimeeyo, haddii uu u baahan yahay nasasho, ama haddii ay ka wanaagsan tahay in garoonka uu ku sii jiro.”